Yini Okufanele Uyenesabe Ngayo Uma Amabhubhu Aphethwe Ikhompyutha Yakho? - Uchwepheshe we-Semalt unikeza impendulo
Ama-botnets ayaziwa nangokuthi ama-robot amanethiwekhi. Empeleni inethiwekhi enkulu yamakhompiyutha namadivayisi eselula aphethwe yi-virus noma i-malware. Abaqaphi balawula le malware futhi bavame ukwenza imisebenzi ehlukahlukene. Laba baduni noma abagaxekile ngokuvamile babhekwa njengabelusi bebhola. Umshini ngamunye othelelekile ulawulwa futhi uqhutshwa yi-bot ethize, futhi umhlaseli uyala amakhompyutha kumabhodane akhe futhi enze izenzo zokwephulwa komthetho.
Isilinganiso se-botnets senza abahlaseli benze izenzo zombili ezinkulu nezincane ezingenakukwazi ukwenza nge-malware noma amagciwane ajwayelekile. Njengoba ama-botnets ehlala ngaphansi kokulawulwa kwabahlaseli basemakhaya, imishini egciwane igcina ithola izibuyekezo futhi iqhubeke ishintsha ukuziphatha kwayo. Ngenxa yalokho, abelusi bebhola bangakwazi ukuqasha kalula ukufinyelela kubathengi kanye nezigebengu eziku-inthanethi futhi bahlukanise ama-botnets abo zibe izingxenye ukuze benze inqwaba yokusebenza, okuhloswe ukuba banikeze izinzuzo eziningi zezezimali.
Izenzo ezivame kakhulu noma amakhono ama-botnets achazwa ngezansi nguMichael Brown, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende:
1. I-imeyli ogaxekile
Njengoba uthola ama-imeyili amaningi nsuku zonke, amathuba okuba i-ID yakho ye-imeyili ingaphansi kokuhlaselwa kwe-hacker. I-botnets yogaxekile isayizi enkulu futhi isetshenziselwa ukuthumela imilayezo yogaxekile kufaka phakathi i-malware. Bavame ukubheka izinombolo ezivela ku-bots online. Isibonelo, i-botnet ye-Cutwail ingathumela imiyalezo engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nsuku zonke. Isetshenziswa kabanzi ekusakazeni amagciwane kanye ne-bots futhi iqoqa amakhompiyutha amaningi nakakhulu kubhodini eliphakathi..
2. Ukuhlasela kwe-DDoS
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kusetshenziselwa ukulinganisa okukhulu kwamabhodlela bese kulayishwa inethiwekhi ekhonjiwe noma amaseva ngezicelo ezithile. Baphinde bahlinzeke ngamakhompiyutha abo, futhi izinhloso zabo eziyinhloko yizinhlangano ezinkulu, amaqembu ezombusazwe kanye nezinkampani ezithumela ngaphandle. Bavame ukuqeda ukuhlaselwa kwezimali.
3. Ukuphulwa ngokwezimali
Ukuphulwa kwezimali kuhlanganisa amabhodlela aklanyelwe ukweba ngqo kwezimali kusuka kumabhizinisi amakhulu. Baphinde babambe ulwazi lwekhadi lesikweletu namaphasiwedi e-PayPal. Ama-botnets wezezimali, njenge-botnet ye-Zeus, anesibopho sokuhlaselwa okukhulu okubandakanya okuningi kwamahora asebiwe kusuka kumabhizinisi amaningi ngesikhathi esifushane kakhulu.
4. Izinsolo ezihlosiwe
Lawa angama-botnets amancane ahlanganisa ama-bots aphezulu futhi athambekele ekunciphiseni amakhompyutha athile. Abahlaseli bathumela i-bots ezinhlanganweni ezilula ukungena futhi zifake amadivaysi amaningi kwinethiwekhi ethintekile. Izintshisekelo ziyingozi njengoba zihlasela izinhlangano ezinkulu futhi ziba idatha yezimali, izakhiwo zobuhlakani, nolwazi lwamakhasimende.
Kuphephile ukusho ukuthi ama-botnets adalwe lapho uchwepheshe ethumela ibhu kusuka ohlelweni lwakhe lokulawula noma iseva ethile ngaphandle kokwazi komsebenzisi. Ama-botnets athola inani elikhulu lemishini ngokushesha. Uma usuvula amafayela angalungile, i-bots izobika emuva ku-botmaster amenze azi ukuthi idivayisi entsha yekhompyutha ilungele ukuhlaselwa. Ezinye izimpawu zokusebenza eziyingqayizivele ze-botnets kanye ne-bots zenza zibe zifanelekile ekuhlosweni kwesikhathi eside.